Ifulethi Lasezindaweni Ezinhlanu Eline-Panoramic Ocean Views - I-Airbnb
Ifulethi Lasezindaweni Ezinhlanu Eline-Panoramic Ocean Views
Hlala emuva futhi uvumele ukubukwa kokushona kwelanga ngaphesheya kwe-Atlantic Ocean kukugeza phezu kwakho, kusukela ekunethezekeni kwegumbi lakho lokuphumula! Ikhaya likanokusho elinephansi eliqinile lamapulangwe, usilingi ocindezelwe kakhulu namagumbi okulala amakhulu, akhanyiswe yilanga. Kokubili ikhishi negumbi lokuphumula elinepulani elivulekile likuvumela ukuthi ubuke amagagasi nomhlaba uginqika eduze kwe-promenade enemibala engezansi. I-inthanethi enesivinini esikhulu, engafakwanga ifayibha kanye nenkulu, i-HD Smart TV enezimbali zesathelayithi egcwele ikunikeza ukufinyelela nokuzijabulisa kwasekhaya ongakudinga futhi ikhishi elihlome ngokuphelele liyintokozo kulabo abajabulela ukuphakela ndawonye ukudla okumnandi nokudla nomndeni. nabangane.
Hlala emuva futhi uvumele ukubukwa kokushona kwelanga ngaphesheya kwe-Atlantic Ocean kukugeza phezu kwakho, kusukela ekunethezekeni kwegumbi lakho lokuphumula! Ikhaya likanokusho elinephansi eliqinile lamapulangwe, usilingi ocindezelwe kakhulu namagumbi okulala amakhulu, akhanyiswe yilanga. Kokubili ikhishi negumbi lokuphumula elinepulani elivulekile likuvumela ukuthi ubuke amagagasi nomhlaba uginqika eduze kwe-prome…
“Vuka ubone okubonwayo, amakha nemisindo yolwandle i-Atlantic Ocean ezulazula kancane kuzo zonke izinzwa zakho!”
– Andrew, umbungazi wakho
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, umbhede we-queen
4.90 (izibuyekezo ezingu-93)
Ifulethi lilenga ku-Beach Road, elinendawo ewubukhazikhazi ye-Sea Point egoqa emnyango wakho. IGreen Point Park kanye nenkundla kuqhelelene nje nenqwaba yezitolo ezinkulu, izitolo zekhofi, izindawo zokudlela, ama-delis, amabha, ama-ayisikhilimu, amasaluni kanye nohlu luyaqhubeka. Ngezimpelasonto imakethe ye-Oranjezicht emangalisayo iwuhambo lwemizuzu eyi-10 nje kuphela, futhi ngale kwalokho kukhona i-V&A Waterfront edumile enakho konke okuthokozisayo kokuthenga kanye ne-Zeits Art Museum engasoze yalibaleka.